Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tovolahy vao herotrerony mamaly ny antson’Andriamanitra i Frera Raboasalama Dimbisitraka Larzulin Cuellar sy i Frera Razafindrakoto Nicolas Lucien. Ao amin’ny Fikambanana “Congrégation de la Mission “ na Lazaristes no misy azy. Niroso tamin’ny laharana maha Diakra izy mirahalahy, ny alakamisy 21 janoary teo, tao amin’ny Paroasy Joany Paoly Faharoa, Ampahidrano Fianarantsoa. Nitarika ny Sorona Masina ny Arsevekan’Antsiranana, Mgr Ramaroson Benjamin Marc. Teo koa i Mompera Visitera, Rafanomezantsoa Alexandre Zéphirin, c.m, lehiben’ny Fikambanana Lazarista Provinsy Madagasikara, notronin’ny mpikambana maro. Tonga niombom-bavaka ny fianakavian’ny nohamasinana, ny Pretra sy ny relijiozy tapaka sy namana ary ny fianakaviambe Vinsansianina. Teo am-panombohan’ny Eokaristia no nanambaran’ny Eveka mpanamasina fa tsy izy roalahy ihany no hamasinina fa ny mpanotrona ihany koa. Fahasoavana ho an’ny fianakaviana nipoirana ny fananana diakra. Fa fahasoavana ho an’ny krisitianina rehetra sy ny Fiangonana, indrindra ny Fikambanana izay eo ambany fiarovan’i Md Vincent de Paul mpanorina.
Nampifandraisin’ny mpitarika amin’ny zava-misy ankehitriny ny fampianarana nentiny. Ny maha olombelona antsika mihitsy no voatohintohina ankehitriny noho ny Coronavirus. “Korontana viriosy”. Maro, hoy izy ny zavatra mikorontana ao am-pontsika ao sy ety ivelany. Maro koa ny zavatra tsy mipetraka amin’ny laoniny ka maha very fanahy mbola velona. Nambarany fa isan’ny fototry ny fiainantsika ny fifandraisana. Foana anefa izany raha tsy ao anatin’ny fifanajana. Fototry ny fifanajana ny fifampiarahabana. Nohariny tamin’ny fahotana nataon’i Adama sy Eva ka nahatonga azy hiafina, ny zava-misy ankehitriny. Tsy te hahita an’Andriamanitra izy mivady rehefa avy nanota ka niafina (confiner, confinement).
Totohondry ny fifampiarahabantsika ankehitriny. Ady sy hery setra no ambadik’izany. Tsy izany ihany fa ampiasaina koa ny kiho ho solon’ny fifandraisan-tanana. Fanilikiliana ny hafa no fonosin’izany. Potika ny fifandraisana. Izany no korontana fara-tampony. Tena fanonganan-panjakana izy ity. Araka ny mahazatra fantatra anarana sy hita maso ny mpanongam-panjakana. Fa ity indray mitoraka ity kosa mifanohitra amin’izany. Koa raha tsy mitandrina isika, ho voahongany daholo ny zavatra rehetra. Ny tena tadiaviny dia ny fanonganana ny Fanjakan’Andriamanitra. Efa naverin’i Jesoa tamin’ny laoniny tamin’Izy tonga Nofo anefa ny fifandraisantsika tamin’Andriamanitra sy ny olombelona namantsika ary ny zavaboary. Ho resintsika ny ratsy raha mahay mandray Azy isika.
Tahaka ny nanirahan’Andriamanitra an’i Jesoa no anirahana koa an’izay hohamasinina. Izany no nanombohan’ny mpanamasina ny tantsoroka nataony tamin’izy mirahalahy. Irahina hanarina izay tsy nety ho amin’ny fiombonana amin’i Jesoa. Hikolokolo ny fifandraisana. Izany no fanompoana maha Diakra. Manana ny anjara toerany sy ny andraikiny ny Diakra ao amin’ny Eglizy. Hanampy ny Eveka amin’ny raharaha masina, amin’ny toriteny sy famoaboasana ny Soratra Masina izy. Miandraikitra ny fanomanana ny Eokaristia eo amin’ny otely koa ny Diakra. Mitohy amin’ny fizarana ny Vatana aman-dRan’i Jesoa Kristy amin’ny kristianina io asa fanompoana io. Tsy izany ihany fa anjaran’ny Diakra ihany koa ny manomana ny olona amin’ny Eokaristia, manao Batemy, manatrika mariazy ary ny mizara ny sakramentan’ny marary. Azony atao ny mitarika ny vavaka amin’ny fandevenana kristianina. Nisy ny fametrahan-tanana, fomba nolovaina tamin’ny Apostoly hahatomombana ny fankalazana. Samy babon’ny fitiavan’i Kristy izy mirahalahy. Hanampy azy ireo amin’ny fiainana ny fanokanan-tenany ny nosafidiny. “Tsy izahay … fa ny anaranao no omena voninahitra.” (Sal 115, 1). Izany no andalan-tsoratra manentana ny Diakra Nicolas. Voairaka ho any Ambila Manakara izy. “Mitoera ao amiko…” (Jn 15 4a) kosa ny an’i Diakra Sitraka. Izy kosa handeha hanampy ny rahalahiny any Atsimo misy ny kere dia ao Ranomana, Diosezy Taolagnaro. Izany indrindra no ilana ny Diakra. Ny fiainantsika manontolo no tompoiny mba ho eo anivontsika tokoa i Jesoa.